धेरै औषधि सेवन गर्नुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईलाई डिप्रेसन पनि हुनसक्छ
धेरै औषधि सेवन गर्नुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईलाई डिप्रेसन पनि
सुर्खेत, २२ चैत (जागरण) । मानिसमा उदासिनताको रोग अर्थात डिप्रेसन सुर्खेतको स्वास्थ्यको चुनौतिको रुपमा विकसीत भइरहेको पाइएको छ ।
मानिसहरुका व्यवसायिक तनाव, असफलताजस्ता कारणले मानिसमा डिप्रेसन भइरहेको पाइएको हो ।
सुर्खेत जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तीन सय २८ जना डिप्रेसनका नयाँ विरामी फेला परेका जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पुरुषको दाँजोमा महिलामा डिप्रेसन धेरै हुने गरेको सुर्खेतका चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा डिप्रेसनका विषयमा गरिएको अन्तरक्रियामा चिकित्सकहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले यो समस्या पछिल्लो समय बढिरहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सबैको भुमीका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
अन्तक्र्रियामा जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सम्भुप्रसाद ज्ञवालीले डिप्रेसन भएमा मानिसहरुलाई मानसिक तथा शारिरिक रुपमा अशक्त बनाउने भन्दै यसमा ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो ।
समयमै डिप्रेसनको उपचार नगरिए त्यस्तो समस्या भएको व्यक्ति आत्तिने अवस्थामा ठुलै समस्या हुने बताउनुभयो ।
डिप्रेसनको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि माथिल्लो तहबाटै नियम, बजेट तथा जनशक्तिको ब्यवस्था नगरिदा समस्या बढेको प्रमुख ज्ञवालीको भनाई छ ।
उहाँकाअनुसार डिप्रेसनको औषधीको उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई यसबारे तालिम दिएमा यस्तो समस्या भएका विरामीलाई सेवा दिन सजिलो हुनेछ । धेरै औषधी मात्र प्रयोग गर्नु पनि डिप्रेसनको कारण भएको बताउनुभयो ।
हरेक वर्ष अप्रिल ७ तारेकमा मनाइने विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा ‘उदासिनताको रोगः खुलेर कुरा गरौ’ भन्ने तय गरिए पछि सुर्खेतमा यस विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।